Amaala Antigua na Barbuda - National Development Fund (NDF) na-alụbeghị di
Amaala Antigua na Barbuda - National Development Fund (NDF)
National Development Fund (NDF) bụ ego na-enweghị uru na-adabere na nlekọta nke ndị omeiwu site na mkpesa nke ọnwa isii ọ ga-ewega na nzuko omeiwu zuru ezu iji nye ohere maka nghọta na ịza ajụjụ. A ga-enyocha ego a site n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịkọwapụta ego na mba ụwa.
Emebere ya n'okpuru ngalaba 42 (2) nke Iwu Nchịkwa Ego 2006 maka ebumnuche nke itinye ego nke gọọmentị na-akwadoro, gụnyere ndị ọrụ mmekọrịta ọhaneze na ndị nwere ego enyere amara.
Nweta ụmụ amaala n'okpuru nhọrọ mịnịstrị ego NDF chọrọ onyinye na ntanetị mmepe obodo na ntinye ego nke $ 100,000 XNUMX kwa ngwa. Ihe ntinye aka di ka uzo ugwo otu oge.
Onye choro ya nwere ike gụnye onye di ma obu nwunye, ndi umuaka na ndi nne na nna ndi kariri iri-aho iri n’ise n’ime akwukwo a n’enweghi onyinye onyinye NDF a choro, n’agbanyeghi ndi ochichi na oke ntinye aka ga-anata ego n’onye obula edeputara n’ime ngalaba ego.
Usoro ntinye ngwa ga-akwụ ọtọ ma enwere ike ịnweta akwụkwọ anamachọihe sitere n'aka onye nnọchi anya nke ikike, onye ikike site n'aka ndi amaala ikike site na Ngalaba Mbata (CIU).
Na ntinye nke ngwa gị, a ga-agwa gị ka ịkwụ ụgwọ ọrụ ịdị uchu zuru ezu yana ụgwọ ọrụ gọọmentị 10%. Mgbe inwetara leta nkwado, aga agwa gi ka itinye ego nke ego nhazi gọọmentị, ụgwọ paspọtụ na onyinye gị. A na-akwụ ụgwọ ahụ ozugbo na Ngalaba ahụ, a ga-enwerịrị enyemaka gị na Gọọmentị Pụrụ Iche iche n'ime oge 30.
Ozugbo enwetara, a ga-enye asambodo idebanye aha maka ụmụ amaala maka onye na-arịọ maka ya na ndị ezinaụlọ ha nke a ga-enyefe akwụkwọ ikike ngafe na akwụkwọ ikike paspọtụ ha na akwụkwọ ọ bụla na-esonye. Onye nnọchi anya / onye nnọchite anya gị ga-edetara gị akwụkwọ ikike ngafe na Asambodo hipmụ Amaala.
Ntinye aka na mmepe mmepe mba
A. Maka otu na-arịọ arịrịọ, ma ọ bụ ezinụlọ nke 4 ma ọ bụ karịa
Ihe onyinye US $ 100,000
Feesgwọ nhazi: US $ 30,000
B. ezinụlọ nke 5 ma ọ bụ karịa: -
Ego Nhazi: US $ 30,000 gbakwunyere US $ 15,000 maka mgbakwunye ọzọ